▷ "Ok Google" Habee Aaladeyda - 【Isbarbardhigga】 2022
«Ok Google» qalabayn qalabkayga
Tababarada | 0 Comments
Google ayaa qaaday tallaabo cusub oo ku wajahan hal -abuurka badeecadda iyada oo horumarinaysa mid ka mid ah kaaliyayaasha codka ugu awoodda badan suuqa. Ma aha wax ka badan oo aan ka yarayn "Ok Google", farsamada ku salaysan Sirdoonka Artificial (AI) oo u timaada inay si toos ah ula tartamaan kaaliyayaasha kale ee leh sumcad caan ah sida alexa siri y kortana
Waxay ku shaqaysaa amarrada codka, kuwaas oo si weyn u yarayn doona adeegsiga gacanta ee qalabka waxayna u oggolaan doontaa hawlgal wax ku ool ah marka la helo amar. "Haye, Ok Google, samee qalabkeyga", ayaa tusaale u ah sida nidaamkani u shaqaynayo si dhammaystiran oo isugu jira kuwa casriga ah iyo aaladaha Android ama iOS.
Laakiin hadda oo aan tixraacno tusaalahii hore, waxaan jeclaan lahayn inaan ku tusno sida loo habeeyo "Ok Google" aaladdayda, markaa fiiro gaar ah u yeelo.
Sida loo habeeyo Ok Google aalad?
Si kasta oo ay tahay nidaamka qalliinka ee taleefankaaga gacanta ama kiniiniga, waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad haysato ikhtiyaarro aad ugu habayn karto si fudud, dhaqso iyo ammaan. Ujeedadu waa in lagu raaxaysto a nidaamka codka soo jiidasho leh taas oo sii wanaajineysa khibradaada aalad kasta horteeda.
Ku samee Ok Google on Android
Nidaamku wuxuu u baahan yahay dhammaystirka dhawr tallaabo oo fudud. Kadib, waxaad ku raaxeysan kartaa mid ka mid ah adeegyada ugu fiican Google gabi ahaanba bilaash.
1 Tallaabo: Waxa ugu horreeya waa in la raaco waddada lagu galayo arjiga: Abka Google> Dheeraad> Dejin> Cod> Ok Google> Isku -darka Codka.
2 Tallaabo: Hadda waa inaad dhaqaajisaa ikhtiyaarka "Ok Google", adigoo ku riixaya badhanka midigta midig.
3 Tallaabo: Tallaabada xigta waa inaad codkaaga ku duubto moobilka ama kiniiniga, si nidaamku u awoodo inuu garto dhawaaqa hadda ka dib. Waxa kale oo muhiim ah in la bilaabo saaxirka.
4 Tallaabo: Ka hor inta aan la fulin habkan, interface ayaa soo muuqan doona oo si faahfaahsan u bixinaya sharraxaaddan. Daaqadan, guji badhanka Xiga; markaa, daaqadda xigta, dooro In la aqbalo.
5 Tallaabo: Waxa xiga ee ay tahay inaad samayso waa inaad ku dhawaaqdo weedha Waayahay Google Samee jilicsan, xoog badan, oo la fahmi karo. Ma sameysay? Hagaag, guji badhanka Xiga oo mar labaad ku celi isla nidaamkii. Dhammee adigoo gujinaya badhanka Dhameystir
6 Tallaabo: Tallaabada ugu dambaysa waa in la hawl -geliyo si ay si fiican u shaqayso, u isticmaal shaashadda dillaacda, adiga oo ka dambeeya shaagagga. Sidoo kale, markaad xidhato dhegaha -dhegaha, iyada oo loo marayo nidaamka isku -xidhka Bluetooth.
Ku samee Ok Google on iOS
Aaladaha mobilada ama macruufka, nidaamka samaynta Ok Google sidoo kale waa mid aad u fudud. Si aad u hesho natiijooyin wanaagsan waxaa jira tallaabooyin ay tahay inaad raacdo.
1 Tallaabo: Soo dejiso nooca ugu dambeeyay ee Kaaliyaha Google. Waxaad ka heli kartaa APP dukaanka APP. Soo dejintu gabi ahaanba waa bilaash.
2 Tallaabo: Kahor intaadan fulin qaabeynta, aqbal shuruudaha iyo xaaladaha lagu dhisay isla nidaamka.
3 Tallaabo: Hel ikhtiyaarka goobaha laga soo bilaabo qolka. Kadib tag qaybta lagu tilmaamay sida Siri y Raadin
4 Tallaabo: Interface -ka cusub wuxuu tusi doonaa liiska codsiyada la heli karo, oo uu ka mid yahay midka cusub ee la rakibay Kaaliyaha Google.
5 Tallaabo: Tallaabada xigta waa hawlgelinta xulashooyinka Siri iyo Raadinta, ka sokow Talo soo jeedin iyo Ogolow shaashadda qufulan. Labadan xaaladood, bedelka ayaa loo baahan yahay in loo wareejiyo dhinaca midig.
6 Tallaabo: Ku dar gaagaabyada u dhigma, oo aad ka heli karto dhammaadka liiska la heli karo.
7 Tallaabo: Codkaaga deji si nidaamku u garto. Si aad tan u samayso, waa inaad riixdaa oo qabtaa badhanka gaduudan ee ka muuqda shaashadda kuna dhawaaq Ok google, hey google ama weedh kasta oo kale oo aad doorbidayso.
8 Tallaabo: Maadaama ay tahay inaad ka isticmaasho Google nidaamka Siri, waxa ugu fiican ee la sameeyo si loo dhaqaajiyo amarka codka waa inaad tiraahdaa kuwa soo socda: Hey Siri, Ok Google o Hey Siri, kaaliye furan.
9 Tallaabo: Tallaabada ugu dambeysa ayaa ah inaad dhahdo amarradaas codka ah ee horay loo doortay, laakiin marka hore waa inaad Siri ku weydiisaa cod dheer oo cad si aad u furto kaaliyaha Google.
Dejinta Ok Google waa mid aad u fudud, iyadoon loo eegin nidaamka hawlgalka aaladdaada. Haddii aad rabto inaad hagaajiso khibradaada, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad raacdo tillaabooyinka hore loo soo sheegay.